Miaraka amin'ny lazan'ireo milina tsiro maro samihafa, ny kalitaon'ny tsipika fahita dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny fanodinana sy ny vidin'ny fahitana ny famindrana. Mandritra ny fampiasana ny fehin-kibo, ny kalitaon'ny fikosoham-bary dia hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny tsipika. Hita mibaribary ny maha zava-dehibe azy. Amin'izao fotoana izao dia maro ny milina hazo dia tsy miraharaha firy an'io. Na dia mihaino tsara aza ny mpanamboatra sasany, betsaka ny olana ao amin'ny fikosoham-bary noho ny tsy fahampian'ny fahalalana matihanina ilaina. Androany dia holazainay aminao ny fomba ahafahana manenjana tsara ny fehin-kibo.
Ny voalohany dia ny fitsarana rehefa tokony hatsorina, ny feta no ipetahana.
Voalohany, mitsara avy eny ambonin ny kitay hazo, raha malefaka ny gorodonny hazo hazo notapahina tamin ny fikosoham-bary vaovao dia tsy misy fluff miharihary, ary ny olana momba ny diso diso ntaolo ambony sy ambany ambany. Raha vao misy ireo olana ireo ary tsy misy intsony dia levona amin'ny fotoana;
Ny faharoa dia ny hitsara araka ny feon'ny tsifina. Amin'ny ankapobeny dia somary mazava ny feon'ny tsofoka vaovao, ary ny rivotra tonon'ny tsipika dia malefaka rehefa tokony hatsangana;
Ny fahatelo dia ny hitsara araka ny herin'ny fiasan'ny milina. Rehefa tokony hatsangana ny mason-tsofa, hampitombo ny fiasan'ny milina ny milina noho ny fitomboan'ny;
Ny fahefatra dia ny hamaritana ny halavany aorian'ny fikosehana araka ny traikefa fitantanana.
Ny faharoa dia ny fikosoham-bary tsara ny mason-tsofa maromaro.
Amin'izao fotoana izao, ny vatan-tsabatra marobe amin'ny ankapobeny dia mifidy ny zoro miloko aloha. Ny fomba fikosoham-bary marina dia ny fitazonana ny zoro tany amin'ny tsipika vita amin'ny tsipika tsy miova, raha mitazona ny fikosoham-bary mifototra amin'ny vata famandriham-bary dia jereo ity tarehimarika manaraka ity:
Mpanamboatra maro no manosihosy ny mason-tsofa amin'ny endrika manaraka: !!!
Ireo fomba roa ireo dia manova ny endrika tany am-boalohany ny valin-kasina, izay mora mahatonga ny fotoana ny fika mitsingevana aorian'ny fikosoham-bary, ary mampisy ny fika ny vatan-tsilo aza tsy manimba sy handoro ny fika;
Ka tokony hojerenao ny fikorohany
Article copyright, pirinty tsy misy fanekena!
Fomba fikosoham-bary diamondra ho an'ny tungeta karbàla, Carbide boribory ny vatan-tsolika vita amin'ny vy manapaka, Maitso kodiarana ho an'ny famonosanana, Fanadiovana kodiarana diamondra / Cbn fanadiovana kodiarana ho an'ny fitaovana fanangonam-bolo, Familiana kodiarana ho an'ny fitaovana famonosana, 5inch famatorana kofehy famatorana kodiarana ho an'ny famonosana fitaovana famonosana baoritra,